Mavhiri eMac Pro ave kuwanikwa muchitoro cheApple | Ndinobva mac
Mac Pro mavhiri ave kuwanikwa muApple Chitoro
Pasina kupokana ichi chinhu chinowanikwa nevanhu vashoma vanozoda kutenga, mamwe mavhiri eMac Pro kubva 850 euros! Hongu, mutengo weichi chishongedzo cheMac Pro inodhura pamwe chete nechiratidziro uye nemidziyo yacho pachayo isu tiri kutarisana nemitengo isingasvikike kune vazhinji vedu, izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvakagadzirwa chaizvo kune nyanzvi dzichazowana mari. Mari yakawanda navo kuti vakwanise kuisa mari mukudyara, izvo zvisiri zvidiki.
Ramba uchifunga kuti iwo wepasi mutengo weizvi Mac Pro inotanga pa6.499 euros uyezve isu tinogona kuwedzera akasiyana emukati masisitimu ayo aizoisimudza kumatengo asingagone kune ruzhinji rwevanhu. Zvine musoro, iwe unogona kuwedzera iyo 6-inch Pro Ratidza XDR Retina 32K skrini ye5.499 euros uye hwaro hwayo iyo inotengwa zvakasiyana kune 1.099 euros, saka mavhiri e849 euros haasi iwo anodhura anodhura ...
Iwo mavhiri kit yeMac Pro akagadzirwa nesimbi isina simbi uye rabha yakagadzirirwa kuyera kune ino midziyo uye navo unogona kufambisa michina kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe nyore. Iyo vhiri kit inowedzera iyo 1/4 ″ kusvika 4 mm Allen kiyi, asi mamwe maturusi anodiwa kuisa mavhiri uye hazvina kuiswa.
Chinja Mac Pro makumbo kuita mavhiri wedzera nezve 2,5 cm kusvika pakukwirira yeyakajairika chimiro chemidziyo saka shanduko iyi pakukwirira inofanirwa kutariswa kana iwe uchida kutenga iyo kit. Ehezve, zvinoita sekunge isu chinhu chinodhura uye kuti vashoma vanhu kana makambani anozopedzisira vatenga. Ichokwadi kuti mavhiri anogona kushamisa asi mutengo wawo unodhura zvisinei kuti unoutarisa kupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Mac Pro » Mac Pro mavhiri ave kuwanikwa muApple Chitoro
Podcast 11 × 31: Retro iri mufashoni
Phishing kana spoofing inoshanda zvakanyanya kupfuura nakare kose mazuva ano